အေးမြသောအပိုင်းအစတစ်ခုထဲရှိ Bonbons များကိုပေါင်းစပ်ပါ။ Bon! ခရီး! | Androidsis
တစ်ကွက် Bon! ခရီး! လူကြိုက်များသော manga မှဂိမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိထောင်ပေါင်းများစွာသောကစားသမားများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင်အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းကိုသူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပွဲစဉ် ၃ ခုနှင့် KING တို့၏အလွန်ကြီးမားသော Candy Crush Saga နှင့်ခေါင်းစဉ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုသူ့ကိုခွဲခြားပေမယ့်အဖြစ်အဖြစ်သူတို့အားအကြီးအကဲများနှင့်အတူသူ၏ဂိမ်းများ၏ဒိုင်းနမစ်နှင့်မြန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ် ရှငျဘုရငျဂိမ်းကနေသကြားလုံးခဲ့ကြသည်။ အကယ်လို့ဒီဂိမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာဘယ်လောက်အရောင်၊ တက်ကြွပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်လဲဆိုတာပါပဲ။ ဤနေရာတွင် One Piece သည် Android အသိုင်းအဝိုင်းတွင်အလွန်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ရန်နေရာအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ လုပ်သာလုပ်။
1 ဂျပန် manga ၏ဒဏ္myာရီဇာတ်ကောင်များကိုပေါင်းစပ်ပါ
3 နာမည်ကြီး manga ပဟေintoိအဖြစ်သို့လှည့်
ဂျပန် manga ၏ဒဏ္myာရီဇာတ်ကောင်များကိုပေါင်းစပ်ပါ
အမှန်တရားကတော့ Bonbons အမြောက်အမြား ၀ င်လာသည်ကိုတွေ့ရသည့်အတွက်အတော်လေးရယ်စရာကောင်းသည် ကျနော်တို့သုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပေါင်းစပ်သူတို့ကိုပေါင်းစပ်နေစဉ်နှင့်အတူတကွကောင်းစွာ။ အမှန်တရားကတော့ One Piece Bon ပါ။ Bon! ခရီး! ၎င်းသည်အမျိုးအစားအသစ်ကိုမယူဆောင်လာပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ကဒ်များကိုမည်သို့ကစားရမည်နှင့်မည်မျှကောင်းမွန်သည်ကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
Esas ကဒ်တွေဟာ One Piece ရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေပါဖျော်ဖြေရမည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်မှုများနှင့်အတူဂိမ်းတစ်ခုစီ၏ဒိုင်းနမစ်နှင့်ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံကိုရရှိရန်အတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတများကိုသရုပ်ဖော်သည်။ manga ပရိတ်သတ်အားလုံးကဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရမည်ကိုသိကြလိမ့်မည်။ ပြီးတော့မင်းတို့ကများပြားတယ်၊
သူတို့အား ဇာတ်ကောင်ဟာ Bonbons ဖြစ်ကြသည် ကျနော်တို့အနည်းဆုံးသူတို့ထဲကသုံးပေါင်းစပ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဤအမျိုးအစားရှိအခြားဂိမ်းများနည်းတူကျွန်ုပ်တို့တွင်စွမ်းရည်နှင့်စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မည်။ Bonbons အစုံတစ်ခုသို့မဟုတ်ကော်လံတစ်ခုလုံးကိုဖြိုချရန်အခြားစွမ်းရည်များပေါက်ဖွားရန်အတွက်ဗုံး။ အမှန်တရားကတော့ Bonbons ကိုပေါင်းစပ်ရတာဟာ ၀ မ်းသာစရာပဲ။ ငါ့စကားကိုမယုံဘူးဆိုရင်မင်းက free install လုပ်ရုံပဲ။
ထိုမြို့မှ One Piece ၏ပုံပြင်! Bon! ခရီး! နှင့်တစ်လျှောက်တွင်ခရီးသွားလာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပွေီးမှစီးရီး ငါတို့နှင့်အတူဂိမ်းများကိုအလွန်မြန်စေမည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လျင်မြန်စွာပြေးနိုင်သည့်ပဟေthreeိ (၃) ခုနှင့်တတန်းထဲတည့်တည့်နေခြင်းကိုမည်သို့သင်ကြားရမည်ကိုသင်ကြားပေးသောပထမ ဦး ဆုံး။
အခြားဂိမ်းများနည်းတူ One Pie Bon! Bon! ခရီး! ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြု ငါတို့ Bonbons နှင့်အတူငါတို့ကျွန်းကိုတည်ဆောက် ငါတို့ရတဲ့နေကြသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပဟေofိ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုပျော်မွေ့ရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်အကြောင်းအရာများစွာရှိသည်။ တကယ်တော့, Bonbons ငါတို့လိုချင်သောနေရာတိုင်းသူတို့ကိုနေရာချနိုင်, ထိုကျွန်းငါတို့တတ်နိုင်သမျှအေးမြဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။
အစပိုင်းမှာ One Pie Bon နဲ့နောက်ဆုံးသူဌေးတစ်ယောက်ကိုငါတို့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ Bon! ခရီး! ကျွန်တော်တို့ကိုဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသင်ပေးတယ်။ ထိုအခါငါတို့စတင်ပါလိမ့်မယ် ယုတ်ညံ့သောရန်သူများနှင့်အတူခရီး ငါတို့က၎င်း၏စက်ပြင်များ၏အဝင်များနှင့်အပြင်ကိုသိနိုင်ဖို့; ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့သည့်အတိုင်းထူးခြားသောအရာမရှိပါ၊
နာမည်ကြီး manga ပဟေintoိအဖြစ်သို့လှည့်
၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံး One Piece ဂိမ်းမဟုတ်ပါ လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်က RPG ရှိခဲ့သည်, ငါတို့မြင်အဖြစ်ကနောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေပုံရသည် သူ၏ဂိမ်းများနှင့် manga ရှိသည့်နောက်လိုက်အမြောက်အမြား။ အမှန်တရားကတော့သူတို့ဒီမှာကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးသင်ပထမ ဦး ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုသင်သာကြည့်ဖို့လိုသည်။
အမြင်အာရုံအားဖြင့်၎င်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများ၊ သူအပေါငျးတို့ bonbons လှိမ့် ငါတို့ခံစားဘို့ရန်နှင့် fro ။ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောသူတို့သည်တပေါင်းတစည်းတည်းရွေ့လျားနေသည်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းသည်အတော်လေးအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် manga ပရိတ်သတ်တွေအဘို့။
တစ်ကွက် Bon! ခရီး! အဆိုပါ tic-tac-toe ဖြစ်လာဖို့အားလုံးကိုအလိုဆန္ဒနှင့်အတူရောက်ရှိလာခဲ့သည် လက်ရှိဖက်ရှင်အတွက်။ အရည်အသွေးကိုဖြုန်းတီးပြီးမိနစ်ပိုင်းများကိုစက္ကန့်ပိုင်းအထိပြောင်းလဲစေသောဂိမ်းတစ်ခုသည်အလွန်စွဲလမ်းစေခြင်း။ ၎င်းတွင်အဆင့်များစွာရှိပြီး၎င်းတို့ကို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အား၎င်းတို့ကိုအသစ်သောအကြောင်းအရာဖြင့်အသစ်မွမ်းမံရန် ဆက်၍ အားဖြည့်ရန်သင့်အားဆက်ကပ်အပ်နှံရန်သေချာစေပြီး၎င်းကိုဆက်လက်ကစားရန်အားပေးသည်။ စကားမစပ်, လက်လွတ်မထားပါနဲ့ ရောင်းရန်နှင့်အခမဲ့အပေါ်ပရီမီယံဂိမ်း၏ဤစာရင်း coronavirus ၏ဤသည်နေ့ရက်ကာလ။
ကျနော်တို့ကစားခြင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကနေပါဝငျသောအလွန်ပျော်စရာဂိမ်း။ သငျသညျ One Piece ၏ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းအရိုး! BON! ခရီး !!
ရေးသားသူ: BANDAI NAMCO Entertainment က Inc က
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » တစ်ကွက် Bon! ခရီး! နာမည်ကြီး manga မှအလွန်ပျော်စရာကောင်းသောပဟေpိဖြစ်သည်